Muuri News Network » SAWIRO:-Gudoomiyaha G.BANAADIR oo Maanta Laba Arin hordhigay Gudoomiyaasha Degmooyinka.
SAWIRO:-Gudoomiyaha G.BANAADIR oo Maanta Laba Arin hordhigay Gudoomiyaasha Degmooyinka.
Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale, ayaa maanta kulankiisii ugu horeeyay waxa uu la qaatay Gudoomiyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah kuxigeenadiisa.
Kulanka uu maanta Gudoomiyaha la yeeshay Gudoomiyaasha Degmooyinka ayaa ka dhacay xarunta Gobolka Banaadir, waxaana kulanka intii uu socday looga hadlay sidii loo dar dar galin lahaa howlaha Maamulka Gobolka.
Yuusuf Xuseen Jimcaale, ayaa Gudoomiyaasha Degmooyinka iyo masuuliyiinta kale uu la kulmay ka codsaday sidii loo dar dar galin lahaa howlaha maamulka sida amaanka, Nadaafada iyo howlaha dariseynta.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa balan qaaday in uu kormeer ku tagi doono dhamaan degmooyinka Gobolka Banaadir uuna qiimeyn doono sida ay howlaha maamulka uga socdaan 17-da Degmo uu ka kooban yahay Maamulka Gobolka.